Xakamaynta MCU - Shenzhen Fumax Technology Co., Ltd.
Guddiyada Xakamaynta MCU
MCU oo ah qaybta ugu muhiimsan ee IOT, ayaa si xawli leh u horumartay sanadihii la soo dhaafay.
Guddiga xakamaynta MCU, oo leh magac buuxa oo ah Qaybta Xakamaynta Micro, ayaa isku dari kara mashiinka ku-saleysan mashiinka yar yar, qaybaha kale ee elektarooniga ah iyo PCB isku dhafan si loo xakameeyo wareegyada dibedda. Iyadoo lagu saleynayo astaamaha cabbiraadda warshadaha iyo walxaha xakamaynta, bay'adda, iyo is-dhexgalka, guddiga kontoroolka MCU wuxuu u dhaqaaqayaa hawsha sameynta kantaroolka lacagta, hagaajinta kalsoonida deegaanka warshadaha, iyo sameynta isku xirnaanta nidaamka kombiyuutarka dalabka si dabacsan oo habboon .
Codsiga looxyada xakamaynta MCU:
Caadi ahaan waxaa loo isticmaalaa xoogaa gacan ku haynta warshadaha, sida cabirka & xakamaynta nidaamka, mitirka caqliga badan, alaabada mechatronics, smart interface, iwm. qalabka, miisaanka elektarooniga ah, diiwaanka lacagta, qalabka xafiiska, qalabka jikada, iwm. Soo bandhigida MCU ma aha oo kaliya inay si weyn u wanaajiso howlaha alaabta, waxay hagaajineysaa waxqabadka, laakiin sidoo kale waxay ku guuleysaneysaa Isticmaalka saamaynta
Mabda'a guddiyada xakamaynta MCU:
Way ka dhaqaale badan tahay adeegsiga luqadda C ama luuqadaha kale ee lagu xakameeyo si loo qoro hababka waxqabadka xakamaynta si loo gaaro ujeedka ugu dambeeya ee xakamaynta warshadaha.
Waxyaabaha aasaasiga ah: FR-4
Dhumucda Copper: 17.5um-175um (0.5oz-5oz)
Dhumucdiisuna Board: 0.21mm ~ 7.0mm
Min. Cabirka Daloolka: 0.10mm
Min. Ballaca Khadka: 3mil
Min. Khadka Safka: 3 Mil (0.075 Mm)
Dhammeystirka dusha sare: HASL
Lakabyada: 1 ~ 32 lakab
Dulqaadka daloolka: PTH: ± 0.076mm, NTPH: ± 0.05mm
Maaskarka Alxan midabka: Cagaar / Caddaan / Madoow / Casaan / Jaale / Buluug
Midabka Silkscreen: Caddaan / Madow / Jaalle / Buluug
Tixraaca Heerka: IPC-A-600G Fasalka 2, Fasalka 3
Farqiga u dhexeeya MCU iyo PLD:
(1) MCU wuxuu xakameeyaa aaladaha durugsan inuu shaqeeyo iyadoo la beddelayo heerka I / O dekedda iyadoo loo marayo barnaamij; PLD waa in la beddelo qaab-dhismeedka gudaha ee gunta iyada oo loo marayo barnaamijyo.
(2) MCU waa jab, laakiin si toos ah looma isticmaali karo; PLC waxay leedahay is-dhexgal diyaar ah, waa mid aad ugu habboon oo lagu kalsoonaan karo in si toos ah loogu adeegsado goobta warshadaha, ka dibna lagu xiro is-dhexgalka mashiinka mashiinka si toos ah loogu xakameeyo.
(3) Qalabka loo yaqaan 'MCU chip' waa mid rakhiis ah, waxaana loo adeegsadaa in si otomaatig ah loo xakameeyo badeecooyinka dufcadda ee warshadaha wax soo saarka; PLC waxay ku habboon tahay xakamaynta otomaatigga ah ee warshadaha.